छालालाई सधैं कसरी स्वस्थ राख्ने ? | Hamro Doctor News
By डा. रुपक घिमिरे, छाला रोग विशेषज्ञ
गर्मी होस वा जाडो सधैंभरी छालाको हेरचाहका लागि आम मानिसको टाउको दुखाइको विषय बन्छ । मौसम परिवर्तनसँगै हाम्रो छालामा पनि विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले सधैंभरी छालाको उचित स्याहार गर्नु जरुरी हुन्छ । छालामा हुने बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउन विभिन्न क्रिम तथा औषधिहरुको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
छालाले हाम्रो शरीरलाई पैतालादेखि शिरसम्म ढाकेको हुन्छ । छालाले शरीरमा बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउने, शरीरका अंगहरुलाई ढाकेर सुरक्षा प्रदान गर्छ । यस्तै शरीरका विकार पदार्थलाई पसिनामार्फत बाहिर निकाल्ने, मौसम अनुसार शरीरलाई तापक्रम प्रदान गर्ने र घामबाट प्राप्त हुने भिटामिन डी शरीरमा सोस्ने गर्छ ।
छालाको सुरक्षाका लागि मौसम अनुसार फरक–फरक क्रिम तथा प्रसाधनको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ । जाडोमा बढी सुख्खा हुने भएकाले छालालाई फाइदा गर्ने गुणस्तरीय सामाग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सोझै पसलमा गएर आफैं जथाभावी किन्नुभन्दा छाला तथा सौन्दर्यविद्वको सल्लााह लिनु उपयुक्त हुन्छ । मौसम अनुसार यस्ता प्रसाधनहरु नियमित प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले छालालाई सुख्खापनबाट बचाएर कोमल र मुलायम राख्छ ।
चिसो मौसममा हात गोडा फुट्नबाट बचाउन पनि छाला मुलायम राख्ने क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो छालालाई स्वस्थ र आकर्षक देखाउन मद्दत गर्छ । मोस्चराइजरयुक्त साबुनको प्रयोगले पनि छालालाई कोमल बनाउन मद्दत गर्छ । साथै फेसवास, बडिवास, स्याम्फु र सावर जेलको प्रयोग पनि छालाको लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
हरेक दिन बिहान सफा पानीले मुख धोएर मोश्चराइजर क्रिम प्रयोग गरी सन प्रोटेक्सन क्रिम लगाउनुपर्छ । सामान्य घामको प्रकाशलाई सनप्रटेक्सन क्रिमले रोक्छ । यसरी प्रयोग गरीने सन प्रोटेक्सन क्रिम ४ घण्टासम्म मात्रै काम गर्ने भएकाले बिहान ८ बजे र दिउँसो १२ बजेको समयमा प्रयोग गर्दा फाइदा लिन सकिन्छ ।
अनुहार तथा शरीरमा मेकअप गर्नुअघि सन प्रोटेक्सन प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलुका सुत्नुअघि चिसो पानीले अनुहार धोएर मोश्चराइजर क्रिम लगाउन उपयुक्त हुन्छ । घामबाट कसरी बच्ने
घाममा निस्कनु अघि सन प्रोटेक्सनको प्रयोग गर्ने, दिउँसो १० देखि २ बजेसम्मको घाममा सकभर ननिस्कने वा निस्कनु परे छाता, टोपी तथा सलले अनुहार ढाकेर हिड्ने गर्नुपर्छ ।
अनुहारमा सिधा घामको प्रकाशबाट सकभर जोगीरहनु आवाश्यक हुन्छ । त्यस्तै प्रशस्त पानी पिउने, धुम्रपान, मद्यपान त्याग्ने, तनाव मुक्त रहने र सन्तुलित आहार सेवन गर्ने जस्ता व्यवहार अपनाउनुपर्छ ।
डा. घिमिरेसँग नबिना कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित
Last modified on 2016-05-15 11:25:10
Suman dulalon Sun, Nov 13 2016 11:01 AM
In my face lots of pimple are come and it damge my face.can you give me best solution to remove pimple and black spot